Idi N'ogbe Laboratory Washer Laboratory glassware washer na conductivity monitoring EcoDry ọrụ emepụta na suppliers |Xipingzhe
Ụlọ nyocha ụlọ nyocha
Igwe Ọgbọ nke Abụọ
Laboratory Washer Laboratory glassware washer na conductivity nlekota oru EcoDry
Igwe ihe nkpuchi ụlọ nyocha nwere ọrụ EcoDry
￭Ọkwa okpukpu abụọ, dabara na ịgba ntụtụ na enweghị ntụtụ
Pipettes kwa okirikiri [nọmba] 238
￭Ojiji nke oma nke akụrụngwa -mgbanwe ọsọ kpo oku mgbapụta
￭Nchekwa site na nlekota - ịsacha nrụgide na nlekota ogwe aka
￭Nkwado ihicha dị mma - EcoDry
AkpaakaLaboratory Glassware Washer
Igwe na-asa akwa akpaaka, nke eji na nri, ọrụ ugbo, ọgwụ, oke ohia, gburugburu ebe obibi, nnwale ngwaahịa ugbo, anụmanụ ụlọ nyocha na mpaghara ndị ọzọ metụtara ya iji nye ngwọta nhicha iko.Ejiri ya maka nhicha na ihicha Erlenmeyer flasks, flasks, volumetric flasks, pipettes, vial injection, petri efere, wdg.
pụtara nhicha akpaaka
1. Enwere ike ịhazi maka ihicha iji hụ na nsonaazụ nhicha otu ma belata ejighị n'aka na ọrụ mmadụ.
2. Mfe iji nyochaa na chekwaa ndekọ maka njikwa traceability dị mfe.
3. Belata ihe ize ndụ ndị ọrụ ma zere mmerụ ahụ ma ọ bụ ọrịa n'oge nhicha akwụkwọ ntuziaka.
4. Nhicha, disinfection na mmecha akpaaka, ibelata akụrụngwa na ntinye ọrụ, na-echekwa ego
Nkà na ụzụ ọhụrụ ọhụrụ: Induction ụzọ imeghe na teknụzụ mmechi akpaka:
Mgbe ọnụ ụzọ ahụ rutere n'otu ọnọdụ, onye na-asa ákwà ga-achọpụta echiche mmechi nke ndị ahịa ozugbo.A na-emechi eriri ọnụ ụzọ na-akpaghị aka ka ejikọtara ya na eriri ọnọdụ na-enweghị ntinye aka.
Imeghe ọnụ ụzọ akpaaka: Mgbe emechara nhicha, a na-emeghe eriri ntinye ọnụ ụzọ na-akpaghị aka, a na-agbanyekwa ọnụ ụzọ ahụ n'ọnọdụ a kara aka.Mgbe emepechara ọnụ ụzọ ahụ, a na-eweghachi eriri ọnọdụ na-akpaghị aka, nke na-enyere aka mee ka arịa dị jụụ ma kpọọ nkụ na-akpaghị aka mgbe ihichachara.
1: Mkpọchi ọnụ ụzọ akpaka zuru oke na ike mmechi mgbe niile
2: Ọkọlọtọ karịa ka mmechi akwụkwọ ntuziaka
3: Ọ dịghị mkpa iji aka mechie ụzọ
4: Na-adị nso karịa mmechi akwụkwọ ntuziaka, ọ dị mma maka ikpocha ọkụ dị elu n'oge ihicha ma na-egbochi mmiri mmiri.
Ịdị ọcha dị elu
1. Na-ebubata mgbapụta dị elu na-ekesa na Sweden, nrụgide ihicha ahụ kwụsiri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya;
2. Dị ka ụkpụrụ nke usoro nhazi mmiri si dị, a na-emezi ebe nhicha ahụ iji hụ na ịdị ọcha nke ihe ọ bụla dị;
3. Kachasị mma imewe nke rotary ịgba ogwe aka nke larịị-ọnụ nozulu iji hụ na ịgba bụ 360.° na-enweghị mkpuchi akụkụ nwụrụ anwụ;
4. Na-asa akụkụ nke kọlụm n'ụzọ doro anya iji hụ na mgbidi dị n'ime nke ụgbọ ahụ bụ 360.° kpochara;
5. Ihe nkwado dị elu na-emezigharị iji hụ na ihicha nke ọma dị iche iche nke arịa;
6. Ugboro abụọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ iji hụ na mmiri dị ọcha dum;
7. Enwere ike ịtọ ihe nchacha ma tinye ya na-akpaghị aka;
1.Wash Malite igbu oge ọrụ: Ngwá ọrụ na-abịa na mmalite oge nhazi oge & ngụ oge mmalite ọrụ iji melite ọrụ nke onye ahịa;
2. OLED modul ngosi agba agba, ọkụ onwe ya, ọdịiche dị elu, enweghị njedebe nlele
Njikwa paswọọdụ larịị 4.3, nke nwere ike izute iji ikike njikwa dị iche iche;
5. Ngwá ọrụ mmejọ nchọpụta onwe onye na ụda, ederede kpaliri;
6. ihicha data akpaka nchekwa ọrụ (nhọrọ);
7.USB nhichapụ data mbupụ ọrụ (nhọrọ);
8. Micro ngwa nbipute data ọrụ (nhọrọ)
Ihe ncha akwa iko akpaaka — ụkpụrụ
Na-ekpo ọkụ mmiri, na-agbakwụnye ncha, ma jiri mgbapụta mgbasa ozi na-ebuba n'ime ọkpọkọ nkata ọkachamara iji sachaa elu ime ụgbọ ahụ.enwekwara ogwe aka ịgba elu na nke ala n'ime ụlọ ihicha ngwá ọrụ, nke nwere ike ihicha elu na ala nke ụgbọ ahụ.
Data ndabere Parameter na-arụ ọrụ
Nlereanya Aurora-2 Nlereanya Aurora-2
Ịnye ọkụ 220V/380V ITL akpaka ụzọ Ee
Ihe onwunwe Ime ụlọ 316L / Shell 304 Modul ICA Ee
Mkpokọta ike 5KW/10KW Pump peristaltic 2
Ike ikpo ọkụ 4KW/9KW Ngalaba condensing Ee
Ike ịkpọ nkụ N/A Mmemme omenala Ee
Ọkụ ịsa ahụ. 50-93℃ Ihuenyo OLED Ee
Ọnụ ụlọ ịsa ahụ 198L Igwe nbipute RS232 Ee
Usoro nhicha 35 Nleba anya omume Nhọrọ
The Layer Number nke ihicha 2 (Petri efere 3 n'ígwé) Ịntanetị nke ihe Nhọrọ
Ọnụego ịsacha mgbapụta 0-600L/min Akụkụ(H*W*D)mm 995×617×765 mm
Ibu 135kg Ogo oghere ime (H*W*D)mm 660*540*550 mm
Nke gara aga: Ụlọ nyocha ụlọ nyocha ụlọ nyocha ụlọ nyocha ụlọ nyocha nke nwere mmiri mmiri na-enye ọrụ ihicha ikuku ọkụ
Osote: Ebere nkata nkata dị elu ejiri maka itinye modul ịgbanye FA-Z01
Labconco Laboratory Glassware Washer
Laboratory Glassware Washer nwere nkụ
Lancer Laboratory Glassware Washer
Steelco Laboratory Glassware Washer
VWR Laboratory Glassware Washer
Ngwa ụlọ nyocha akpaaka Glassware maka m...
Ụlọ nyocha ahụike nke China akpaaka Glassware...
Lab washer Laboratory Laboratory ụlọ nyocha bụ...